Home Somali News Kenya:Barack Obama Oo Booqasho Ku Tagaaya Waddanka Kenay
Madaxweynaha dalka Marayanka Barack Obama oo aabihiis uu ka soo jeedo dalka Kenya ayaa ku dhowaaqay inuu booqan doono magaalada Nairobi bisha July ee sanadkan.
Barack Obama ayaa ku soo qoray bogga uu ku leeyahay Twitterka in uu ka qeybgali doono kulan madaxeedka Global Entrepreneurship ee lagu qaban doono magaalada Nairobi. Booqashadan ayaa noqon doonto tii ugu horeysay ee uu ku tago dalka Kenya tan iyo markii loo doortay madaxweynaha dalka Maraykanka sanadkii 2008.
Obama ayaa booqday dalka Kenya sanadkii 2006 isagoo ah senator hase yeeshee waxa uu ka baaqsaday in uu booqdo sanadkii 2013 xilli uu qaarada Afrika booqasho ku marayay. Waxana uu booqday xilligaas dalka Tanzania balse waxa uu ballanqaaday in uu booqan doono dalka Kenya kahor inta uusan ka tegin Aqalka Cad ee looga taliyo dalka Maraykanka.
Barack aabihii ayaa u tegey waxbarasho dalka Maraykanka hase yeeshee waxa uu dib ugu soo laabtay dalka Kenya kadib markii uu dhashay Barack. Obama aabihii ayaa geeriyooday muddo soddon sano laga joogo balse waxaa dalka Kenya ku nool dad ay qaraabe yihiin oo ay ka mid tahay Sarah Obama oo ah ayeydiis.